Anatarika na anapatsa : Anana tena be vitamina
Isan’ireo anana fihinan’ny malagasy ny anatarika. Mazàna no hatao anamadinika izy. Fantaro anefa fa mitondra vokatsoa maro ny fihinanana azy, ary tsy ny raviny fotsiny fa na ny voany aza.
35 taona vao hiteraka : Ny torohevitry ny mpitsabo!
Raha tsikaritrintsika dia amin’izao vanim-potoana izao no toa tsapa fa miha-miandriandry ny vehivavy vao mikasa ny hiteraka voalohany. Inona no mety ho olana ara-pahasalamana raha mihoatra ny 30 taona ny vehivavy vao manan-janaka voalohany ?
Pharmalagasy eny Tanjombato : Efa mitady mpiasa
Efa mipetraka ny foto-drafitr’asa rehetra. Ny tapaky ny volana jona lasa teo no tonga ireo fitaovana rehetra hampiasaina ao amin’ilay orinasa vaovao natsangan’ny fitondrana mba hanamboarana fanafody.
Diabeta Niakatra ny tahan’ireo voa
Nandritra ny nidiran’ny valan’aretina Covid-19 teto Madagasikara dia maro ireo olona tonga manatona toeram-pitsaboana manao fitiliana diabeta raha ny nambaran’ny Dokotera Haja Ramamonjisoa, “directeur des operations” ao amin’ny Amadia.
Village Voara Andohotapenaka Vonona handray ireo te hotiliana sy marary
Nananomboka ny alahady teo no efa nisy ny fanomanana amin’ny fandraisana ireo marary izay hanao fitiliana sy hanaraka fitsaboana etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka.
IAKORA Nahitam-bokany ny ady amin’ny tazomoka
Nahitam-pivoarana ny aretina tazomoka any amin’ny distrikan’i Iakora. Hatramin’ny volana mey lasa teo mantsy dia nanao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana rehetra any an-toerana entina hamongorana ifotony an’ity aretina tazomoka ity any an-toerana.
Voankazo sy legioma tsy madio tsara : mety hahatonga homamiadana !
Tsy natao fotsiny hiadiana amin’ny bakteria sy ny viriosy ary ny loto ny fanasana ny legioma fa antoka hisorohana ny fipoiran’ny homamiadana amin’ny olona iray ihany koa. Vao vita fety rahateo isika dia hamporisihina hihinana sakafo ara-pahasalamana, hanalana ireo singa ratsy anatin’ny vatana.
Vay : volo, sakafo tsy zaka, maloto rà …
Maro dia maro ny antony mahatonga ny vay raha ny fomba fisainana nentim-paharazana no jerena. Tsy fahazakana sakafo, rà maloto, volo niongotra ka nitarika otrikaretina, fihinanana sakay be loatra ka tsy zakan’ny vatana, fihinanana hazan-dranomasina. Ofika no fampiasan’ireo ntaolo fahiny ary tena mandaitra tokoa, hanasitranana ny vay.
Mampipotsaka ny nana ao anaty fery
Noho izy mampipotsaka ny nana miandrona ao anaty fery no mahatsara ny fampiasana ny ofika. Teren’ny ranon’ity akora ity mantsy ilay fery ary mivoaka ho azy avy eo ireo nana sy rà maloto miandrona ao anatiny. Mila vakiana anefa ny lohan’ilay vay.
Fampiasana azy :
· Diovina tsara amin’ny savony nosy sy rano ny fery.
· Sasana tsara hadio ny vato sy ny ofika. Raha efa izay dia kikisana amin’ilay vato ilay ofika mba hivoahan’ny nofony, izay somary miloko maitso. Rehefa somary mandranondranoka dia ahosotra manodidina ny lohan’ilay fery. Tandremana tsy ho tratra io lohan’ny fery io.
· Tanterahana isan’andro, mialohan’ny hatoriana sy ny marina.
Marihina fa raha mbola tsy miala na sitrana ao anatin’ny telo andro ilay vay dia aleo manatona dokotera. Tokony hanatona dokotera ihany koa raha vao sendra manavy be na tsy zaka intsony ny fanaintainana ary raha vao afaka ilay vay.
Vidin’ny ofika : 500 Ariary